Nasaiko notapahin-doha i Joany...
Alakamisy 24 septambra 2020 — Herinandro faha-25 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 9, 7-9 — I Jesoa Kristy Mpamonjy antsika no nanafoana ny fahafatesana sy nanambara ny fiainana amin’ny Evanjely.
Eto amin’ity Evanjely ity no ahafahana milaza fa “ny marina tsy maty”. Na efa maty aza i Joany Baptista izay nasain’i Herôda notapahina ny lohany dia nampifoha ny feon’ny fieritreretany ka nahatonga ity farany nanao hoe : “Iza indray àry izao olona henoko manao zava-dehibe izao”. I Joany Batista izay lazaina fa nanelingelina ny hafinaretina eto an-tany. Azo antoka aloha ny mbola tsy finoany ny fitsanganan’ny maty ka hilaza hoe efa nitsangan-ko velona i Joany. Manenjika tokoa ny feon’ny fieritreretana ka na amin’ny alina aza tsy mahita tory fa lasa ny eritreritra. I Joany moa no antsoina hoe mpialoha lalana an’i Jesoa ; olona marina izy hany ka i Jesoa no toa manohy sy manatanteraka ny fahamarinana nijoroany, satria i Jesoa ihany no nijoroany ho vavolombelona dia Ilay Jesoa Fahamarinana sy Fiainana.
Nalaza tampoka teo i Jesoa satria nanao zava-mahagaga maro, re laza hatraiza hatraiza. Taratry ny olona rehetra manao ny tsy mety i Herôda, nihevitra fa ny fahafatesana no hampangina ny marina tsy hiteny intsony. Indro anefa i Jesoa Ilay Fahamarinana lavorary manaitra ny feon’ny fieritreretan’i Herôda. Vokany, naniry ny hahita an’i Jesoa izy. Te hahita an’i Jesoa izy satria toa mpifaninana aminy, ka misarika ny sain’ny olona hirona tsy hanome voninahitra azy. Fony i Jesoa nohelohina dia nahita tokoa izy saingy fihaonana nankany amin’ny fanesoana ka tsy nitondra fibebahana tao aminy. Tsy ilay faniriana hahita hitondra any amin’ny fibebahana sy ny famonjena.
Ho antsika kosa ny faniriana hahita an’i Jesoa dia hahitantsika ny hasambarana, mitondra antsika hiombonana fiainana Aminy. Ny fihaonana Aminy no mitondra antsika amin’ny fiainam-baovao. Mahita an’i Jesoa isika rehefa miombom-bavaka, mahita an’i Jesoa isika amin’ireo fankalazana isan-karazany toa ny Sakaramenta indrindra ny Eokaristia, mahita an’i Jesoa isika amin’ireo mahantra, ireo henjehina noho ny fahamarinana ijoroany, ireo azon’ny tsindry hazolena. Raha lazaina amin’ny fomba hafa, raha manao soa ho an’ireny antsoina ho madinika ireny isika dia Izy Jesoa ihany no hanaovantsika izany. Koa ho antsika mpanara-dia an’i Jesoa, ireo asa fitiavana an’Andriamanitra sy fitiava-namana ireo no mampitony ny feon’ny fieritreretantsika, mitondra hafaliana sy fiadanam-po ao anatintsika ao. Amen.